Amaanka magaalada baydhbo oo aad koo adkeeyay
Amaanka magaalada baydhbo oo aad koo adkeeyay
Sunday, 05 April 2009 08:37 Author: Administrator
Maamulka Islaamiga ee Alshabaab ayaa si weyn u adkeeyay Ammaanka Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, halkaasoo horaantii sanadkan ay la wareegeen gacan ku heynteeda.
Baydhabo oo ah magaalo istiraatiiji ah oo ku taal K/Soomaaliya ayay wararku sheegayaan in Xoogaga Islaamiyiinta Shabaab ay si aan horay loo arag u adkeeyeen Ammaanka, iyadoona dhaq dhaqaaqa ammaanka lagu sugayo ay ka soo baxayaan warar kala duwan.
Wariyeyaasha ku sugan Baydhabo ayaa soo sheegaya in Xoogaga Shabaab ay bilaabeen dhaq dhaqaaqyo lagu sugayo ammaanka, waxaana Xoogagaas la dhigay wadooyinka faras magaalaha, taasoo ay sii dheer tahay iyadoo adeegsanaya gawaarida dagaalka oo ay Magaalada oo idil ay ku gaaf wareegayaan.
Dadka deegaanka ayaa iyana sheegaya in xilliyada habeenkii ay kala kulmaan Xoogaga Alshabaab ee Magaalada gaaf wareegaya su'aalooyin ay weydiinayaan oo ah halka ay u socdaan iyo magacooda.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in uu dib u soo xusuustay xilligii Mas'uuliyiintii Dowladda ay ku sugnaayeen Magaalada oo sidan si la mid ah loo adkeyn jiray Ammaanka, waxaana arrintan uu ku sheegay mid aanu garan karin ujeedada ka dambeysay, mar hadii ay Magaalada gacantooda ugu jirto isla markaana aanu jirin cid kale oo kula loolami karta.
Gaadiidka dadweynaha ee soo gala Magaalada ayaa lagu baarayaa Koontaroolada looga galo Magaalada Baydhabo, taasoo dadka sii shaki gelisay, waxaana ay ku tilmaameen caado cusub.
Todobaadkii hore ayaa warar la isla dhex marayay ay sheegayaan in Madaxda Saraakiisha Alshabaab ay gaareen Magaalada Baydhabo, si ay ugu kulmaan, laakiin warkaas ayaa hada u muuqda mid soo dhaboobaya, marka loo eego dhaq dhaqaaqyada xaga ammaanka ee ka socda Magaalada